इन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी किन ? – Health Post Nepal
डा. अजित खनाल
२०७५ कार्तिक १६ गते ९:५१
कलिलै उमेरमा ग्यास्ट्राइटिस किन ?
चिकित्साशास्त्रका विभिन्न विधामध्ये इन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी पनि महत्वपूर्ण विधा हुन् । पेट, सानोआन्द्रा, ठूलोआन्द्रालगायत पेटसम्बन्धी रोग तथा गडबडीबारे पत्ता लगाउने तथा उपचार गर्ने शास्त्र नै इन्डोस्कोपी हो ।
पेट तथा आन्द्राको स्थिति थाहा पाउन यो विधि आवश्यक हुन्छ । भिडियो एक्स रे, सिटी स्क्यानले पनि केही हदसम्म यस्तो खराबी पत्ता लगाउन सके पनि त्यसबाट सबै पत्ता लाग्दैन । पेट तथा आन्द्राभित्रै गएर हेर्नका लागि इन्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपीको आविष्कार भएको हो । घाँटीबाट एकप्रकारको यन्त्र छिराएर पेटको स्थितिबारे जानकारी लिने विधि इन्डोस्कोपी हो भने मलद्वारबाट पाइप छिराएर सफा गर्ने तथा आन्तरिक स्थिति थाहा पाउने प्रविधि कोलोनोस्कोपी हो । कोलोनोस्कोपीमा मलद्वारबाट पाइप छिराएर ठूलोआन्द्रा हुँदै सानोआन्द्रासम्म पुर्याइन्छ ।
इन्डोस्कोपी विशेषगरी दुई अवस्थामा गरिन्छ– डाइग्नोसिसका लागि, थेरापीका लागि । डाइग्नोसिसका लागि पाइप राख्ने गरिन्छ र त्यसबाट इमेज हेरेर ग्यास्ट्रिक तथा अल्सर भए–नभएको, अनावश्यक मासु बढे–नबढेको पत्ता लगाइन्छ । इन्डोस्कोपीमार्फत ड्रोनोन्स्कोपले हेरेर पित्तनलीमा खराबी भए–नभएको पनि हेर्न सकिन्छ ।
पेट अत्यधिक दुखेको र रक्तस्राव भइरहेको छ भने पनि अल्सर भएको हुन सक्ने अनुमान गरी यस प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । अथवा, माथिल्लो पेटमा असहज महसुस भएमा तथा खानामा रुचि नभएमा पनि इन्डोस्कोपी गर्नु आवश्यक मानिन्छ ।
इन्डोस्कोपी कस्तो अवस्थामा गर्ने ?
यो प्रविधि बिरामीका लागि अनिवार्य भने छैन । उपचारका लागि आएको बिरामीलाई चिकित्सकले सल्लाह दिएमा मात्रै यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । कुनै पनि मानिसले लामो समयदेखि ग्यास्ट्रिकको औषधि खाँदा पनि ठिक भएको छैन भने यो प्रविधिको प्रयोग गर्नु अनिवार्य मानिन्छ । अथवा, पेट अत्यधिक दुखेको र रक्तस्राव भइरहेको छ भने पनि अल्सर भएको हुन सक्ने अनुमान गरी यस प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ । अथवा, माथिल्लो पेटमा असहज महसुस भएमा तथा खानामा रुचि नभएमा पनि इन्डोस्कोपी गर्नु आवश्यक मानिन्छ ।
थेरापीका लागि इन्डोस्कोपी
इन्डोस्कोपीको माध्यमबाट थेरापीमा विश्व पहिलेभन्दा धेरै नै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । इन्डोस्कोपीले पेटभित्रका विभिन्न समस्या समयमै पहिचान गरी कतिपय अवस्थामा मानिसको मृत्यु हुनबाट रोक्छ । कतिपय अवस्थामा आन्द्रा साँघुरिएर पनि मानिसले खाएको खाना पास नहुने समस्या पनि हुने गर्छ, जसका कारण बारम्बार वान्तासमेत हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा इन्डोस्कोपी गर्दा साँघुरिएको प्वालबाट तार छिराइन्छ, सिआरई बेलुन छिराएर त्यसलाई फुकाउने काम गरिन्छ ।
विगतमा यसका लागि ठूला–ठूला शल्यक्रिया गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा सिआरई बेलुन प्रविधिको सुरुवातपछि त्यसको अन्त भएको छ । अत्यधिक मात्रामा रक्सी तथा सुर्ती सेवन गर्ने तथा कतिपय त्यसको सेवन नगर्ने मानिसमा पनि खाद्यनलीको क्यान्सर भएको अवस्थामा खानेकुरा त परै जाओस्, थुकसमेत निल्न ज्यादै कष्ट भइरहेको हुन्छ । त्यस्तो वेला इन्डोस्कोपीको माध्यमबाट एक जालीजस्तो यन्त्र छिराएर त्यसलाई फुकाउने गरिन्छ ।
इन्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपी सेवा अन्यत्र पनि उपलब्ध भए पनि डबल बेलुन इन्डोस्कोपी सेवा भने वीर अस्पतालमा मात्र उपलब्ध छ । वीर अस्पतालले यो सेवा सुरु गरेपछि यसका लागि विदेश जानुपर्ने समस्याबाट छुटकारा मिलेको छ । यो प्रविधिमा विदेश र वीरमा पाइने सेवामा केही फरक छैन । यसमा वीरले प्रयोग गर्दै आएको मेसिन जापानमा निर्माण भएको हो ।
इन्डोस्कोपीले पेट र जोर्डनमका केही भाग हेर्छ भने कोलोनोस्कोपीले ठूलो आन्द्रा र सानो आन्द्राको अन्तिम भाग हेर्छ । विगतमा सानो आन्द्रा हेर्ने प्रविधि नेपालमा थिएन, तर अहिले वीर अस्पतालमा ‘डबल बेलुन इन्डोस्कोपी’ नामक प्रविधि आइसकेको छ । त्यसको माध्यमबाट अहिले सानो आन्द्राको पूरै भाग हेर्न सकिन्छ । यसमा आधा भाग माथिबाट पाइप छिराएर (इन्डोस्कोपी) हेर्ने गरिन्छ भने आधा भाग तलबाट (कोलोनोस्कोपी) हेर्ने गरिन्छ । त्यसैले अहिले इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी तथा डबल बेलुन इन्डोस्कोपीका माध्यमबाट आन्द्राको सम्पूर्ण भाग हेर्न सकिन्छ ।
विश्वका अन्य मुलुकका तुलनामा नेपालमा इन्डोस्कोपी ज्यादै सस्तो छ । अमेरिका, बेलायत, सिंगापुरलगायत विकसित मुलुकको तुलनामा नेपालमा यो प्रविधि सस्तो छ । नेपालीको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण यो प्रविधि महँगोजस्तो लागेको हो, जुन वास्तवमा होइन । वीर अस्पतालमा इन्डोस्कोपीको शुल्क ७ सय ५० रुपैयाँ छ भने कोलोनोस्कोपीको शुल्क २ हजार रुपैयाँ छ । वार्डमा भर्ना भएका बिरामीको हकमा उक्त शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । निजी अस्पतालहरूमा भने इन्डोस्कोपीको शुल्क २ हजारदेखि ४ हजार ५ सयसम्म छ भने कोलोनोस्कोपीको शुल्क ४ हजारदेखि ९ हजारसम्म रहेको पाइन्छ ।
डबल बेलुन इन्डोस्कोपी वीरमा मात्र
नेपालमा पहिलोपटक इन्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपीको सुरुवात वीर अस्पतालबाट भएको हो । इन्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपी सेवा अन्यत्र पनि उपलब्ध भए पनि डबल बेलुन इन्डोस्कोपी सेवा भने वीर अस्पतालमा मात्र उपलब्ध छ । वीर अस्पतालले यो सेवा सुरु गरेपछि यसका लागि विदेश जानुपर्ने समस्याबाट छुटकारा मिलेको छ । यो प्रविधिमा विदेश र वीरमा पाइने सेवामा केही फरक छैन । यसमा वीरले प्रयोग गर्दै आएको मेसिन जापानमा निर्माण भएको हो ।
भारतका मेदान्त, गंगारामलगायत अस्पतालको शुल्कको तुलनामा नेपालमा इन्डोस्कोपी तथा कोलोनोस्कोपीको शुल्क निकै सस्तो छ । सरकारी अस्पतालमा मात्र नभएर नेपालका निजी अस्पतालमा समेत यो सेवाबापतको शुल्क विदेशमा भन्दा सस्तो छ ।
डा. खनाल वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
Tags: इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, डा.अजित खनाल
स्वास्थ्य चौकीलाई स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण
आज १ हजार २ सय ७२ जना कोरोना संक्रमित, १६ को मृत्यु
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो — कर्मचारी सरूवा गर्ने काम मन्त्रालयबाट हुँदैन
वीर र आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीबीच पाँच बुँदे सहमति
सुरू भएको दुई दिनमै किन रोकियो एन्टिजेन टेष्ट?
वीरका स्वास्थ्यकर्मीका माग पूरा गर्न अस्पताल तयार
चिसोमा सुन्तला खानुका फाइदा